Top 5 Most Beautiful Amahlathi EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Top 5 Most Beautiful Amahlathi EYurophu
Thina obonisa 5 Uninzi amahlathi amahle eYurophu kanye ngexesha leeholide zeXesha leeholide! The quintessential holiday haunt for most travel lovers is ulwandle. Kodwa iYurophu ngakumbi indlela ngaphezu elunxwemeni ukuba ukuhlola. Hamba kunye nathi njengoko sithathe gingqi ngeenxa zonke ezinye amahlathi amahle kakhulu eYurophu.
Libala malunga iilwandle ezixineneyo kunye nabantwana babo elikhulu kunye waBathengisi ethene mbende. Maxa wambi akukwazi ukubetha uxolo nokuthula ihlathi elungileyo. Ukuba onjani zonyango, ngoko makhe nidlobe yegqabi ngeenxa zonke ezinye Europe kakhulu frondescent kunazo.
1st yethu On The Uluhlu Of Uninzi Forests Beautiful EYurophu – I wohlobo Forest, Jemani
I wohlobo Forest Ipaki yelizwe yipaki yokuqala enkulu nenkulu yaseJamani, yaye enye amahlathi amahle kakhulu eYurophu. Kutheni ukuze ubuze? Sicinga isibheno ilele entlango yayo elula kodwa luninzi. Ngenxa umntu nokuyishiya kakuhle yedwa! Le paki lithembisa landscape omangalisayo, iincopho iingangamsha (abo eyaziwa kakhulu Grosser Falkenstein, Lusen, kunye Grosser Rachel), bentaba olunzulu yaye ukuqhuba ibhayisekile migudu, amachibi isibuko, sports opportunities, a isihloko uhambe umdla, kunye nokuninzi.
Efuna ukuthatha usapho kwi God kunye unique ngelixa epakini? Ukuhamba kweenyawo (Baumwipfelbad) e wohlobo Forest National Park uthembisa ukuba kuqubisana olusondeleyo nendalo kunye adventure kusapho lonke. I-1,300 yeemitha ubude bendlela engenazithintelo ikhokelela iindwendwe emazantsi enqaba emileyo yokujonga, ezifundisa iimbono kwakuhle yehlathi endleleni. Ungakhetha kwakhona ukuba bathathe inxaxheba kwimisebenzi umdla en eya. kunjalo, okungcono igcinwa ukuba wokugqibela. Ukusuka kumgangatho weemitha ezingama-44 wokujonga, ufumana ukuze anelise amehlo akho iimbono singaphazanyiswa yehlathi kwaye nkqu Alps likhephu ezilala.
Trillemarka Rollagsfjell Forest, Norowe
Wamkelekile entlango zasendle! Trillemarka Rollagsfjell sendalo yenye yeendawo yokugqibela ehlathini yintombi isizwe. Oku hamba-to bakho ukuba ukunyuka intaba phakathi ukukhula ihlathi endala, Ukuskiya ezintabeni kushunyayelwe, yaye ukuloba R elihle ngokweneneivers kunye namachibi. Kukho kukwakho nentabalala, 93 zizonke, eziphilayo Red ngokulandelana. Qinisekisa ukuba singena kwi mfanekiso kuthiwa Madonna kunye nomntwana, ibekwe 100 meters ngaphandle epakini, izimvo okukhulu kwentili nangaphesheya. Iletha lamanqanaba, njengoko imozulu iyatshintsha kakhulu kuyo yonke indawo.
Belluno IDolomites, ElamaTaliyane
I-National Park of the Belluno IDolomites esusela Cismon kwintlambo de Piave ntlambo yaye yasekwa ngo 1990 ukuba silondoloze le kummandla ixabiso elikhulu zemvelo, leyo sele ziphunyezwe qaphela ukutyhubela iinkulungwane ukuba ubuhle enezityalo bayo olupheleleyo kunye lwepaki yayo. Ngenxa yoko, kwenziwa isigqibo sokuba ukukhusela yawo 32000 hectares panorama yendalo emangalisayo evela ezemidlalo ebusika uphuhliso.
The area is now a yelifa lemveli lesizwe ezixabisa engenakulinganiswa apho, kufanele, imithetho. Into esiyithandayo ngale paki yindawo engafumanekiyo nengafikelelekiyo kwimida yempuma mpuma yeAlps, leyo amaxesha ababephila phambi kokubhalwa kwembali wabona ukuyilwa ezihambayo (i anyamalale yokugqibela phezu 10000 Kwiminyaka eyadlulayo!).
Umahluko phakathi kwe Tre Cime di Lavaredo kunye Belluno IDolomites, eyaziwa ngokuba iintaba libunile ngenxa umbala rockface. Plateaux kubuyisa kunye rockfaces vertiginous: ezi zezwe okhozi zegolide, izidalwa phantse edume ngenxa yobabalo kwabo, zinobungangamsha kwaye zinobungangamsha benyuka esibhakabhakeni kunye nokunqaba kweentlobo zazo.
Thina zini na izizathu ngokwaneleyo lokutyelelwa Belluno IDolomites ithemba yaye kutheni ucinga yenye amahlathi amahle kakhulu eYurophu.
amatyala igugu, Fransi
Engayiwayo Parc National des Ecrins yenye iipaki ezilishumi isiFrentshi zesizwe kunye yesibini ngobukhulu emva Vanoise. the 1000 indawo km ezingama ekhuselweyo luhleli amasebe Hautes Alpes and Isere, yade phakathi Bourg d'Oisans, IBriancon, kunye ne-Embrun. Le paki lihlala Bulelani becala ezinobuhle kwindawo yayo ekude kwaye ke, kuluhlu lwethu lwamahlathi amahle kakhulu eYurophu.
Indawo epakiweyo eneentaba epakini ichazwa kukuwa komkhenkce kunye nemilambo ehamba ngokukhawuleza, eziye wadala iintlambo emaweni emxinwa. Ehlotyeni, beentaba, climbers rock, Iibhayisikile zasezintabeni, Iimbaleki zemilambo ziyathontelana ukuya epakini ukonwabela imozulu entle kunye nomhlaba ophonsa imihlathi. ebusika, snowshoeing, kwindlu ngendlu bhasi ski kunye iintaba zithandwa. the resort ski of Alpe d'Huez uhleli nje ngaphaya kwemida epakini. Oko ikukuthi 10 km i switchbacks ukusuka Bourg d'Oisans.
Isikhululo senqwelomoya saseLyon ukuya eParis
Last Yethu On The Uluhlu Of Uninzi Forests Beautiful EYurophu – A Ihlathi In A Stadium Football, elamaDatshi
Le Attraction okuhlala of Nature ufakelo lobugcisa bethutyana eliguqula iWorthersee ibala lebhola. Esakhiwe ku Klagenfurt, kwaye ngoku ihlathi kunye nofakelo yobuciko!
Around 300 imithi, ezinye ukukhathaza ukuya kwiitoni ezintandathu nganye iya kulinywa ngocoselelo langutela football ekhoyo. lo, zinika umbono wehlathi eliphakathi laseYurophu. kanye hlumela, emahlathini, kuba ubomi balo, tshintsha imibala njengoko ixesha lijika kwaye utsala izilwanyana zasendle.
Hamba ukuhanjelwa 10 lude 10 pm ngemihla (entry free)!
Ingaba ukulungele ukuba asijoje umhlaba entsha kunye moss emanzi? Ukuze sikwazi kwelanga zendalo ngokusebenzisa imithi ezikhupha izithunzi ithemba phezu komhlaba? Ke hop ku- Gcina A Isitimela kwaye Incwadi Your Train Ticket nakubani amahlathi Eyona intle eYurophu, phakathi kwemizuzu!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Top 5 Most Beautiful Amahlathi EYurophu” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-forests-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#ehlathini #amahlathi #forresttrip #ukwenyusa #uhlobo iholide